त्यहाँ रूस को विशाल क्षेत्रमा, अत्यधिक आध्यात्मिक अत्यधिक नैतिक र virtuous धेरै मानिसहरू हुन्। एक यस्तो व्यक्ति Stanislav Minchenko, राम्रो Stachys पिता रूपमा ज्ञात थियो। आफ्नो लामो जीवन को समयमा, उहाँले सारा र व्यक्तिहरूलाई लागि रूसी अर्थोडक्स चर्च लागि राम्रो कुरा धेरै गरे। उसलाई र भाषण बारे।
जीवनको यात्रा को शुरुवात
Stachys पिता भनिन्छ ड्राई Berezovka वोरोनिश क्षेत्र एक गाउँमा मार्च 16, 1942 जन्म भएको थियो। उहाँले आफ्नो भाइ व्लादिमीर संग भयो। उहाँले आफ्नो एकल आमा द्वारा उठायो। परिवारमा त्यहाँ केटाहरू, कहिल्यै quarreled आफ्नो आमा मदत गर्न सँगै सामेल, शान्ति र शान्त थियो। बगैचा, लगाए बाली र पनि सुखा रोटी पाराले जोतेर, काम बाट shirked छैन। आफ्नो आमा, यद्यपि त्यो राम्रो चरित्र एक महिला थियो, तर आफ्नो दुई छोरा सख्त चेक मा आयोजित।
बाल्यकाल मा जीवन Stachys पिता ठीक सजिलो थिएन। स्कूल को न्यानो महिना मा, मोल्ड यात्रा कठिन मा प्राप्त थियो, र हिउँदमा र हिउँ संग littered बाटोमा प्राप्त गर्ने प्रयास गरे, घर देखि धेरै टाढा थियो। तिनीहरूले नम्र भई बस्ने, त्यसैले अक्सर केटाहरू पनि जाडो जूता थियो। तर घरमा समस्या र न्यानो जूता को कमी को धेरै बाबजुद, Stachys निकोदेमसलाई, विद्यालय छुटेका ज्ञान गर्न फैलयो।
न त आफ्नो आमा न त भाइ न त आफ्नो स्कूलका साथीहरू संग शिक्षक कहिल्यै ग्रामीण Hinterland एक साधारण केटा पटक रूस सयौं confessor बन्न कि सोचा हुनेछ, को dilapidated सेन्ट निकोलस चर्च पुनर्स्थापना गर्न मानार्थ पुरस्कार र चर्च सम्मानित गरिएको थियो।
मन्दिरमा Stanislav मा आफ्नो पहिलो काम बाल्यकाल मा सुरु भयो। यो 10 किलोमिटर भन्दा कम केही थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, हरेक आइतबार उनी घर र निकटतम चर्च बीच मन्दिरमा गए। त्यहाँ उहाँले वेदी मा पुजारी सहायता।
तर तुरुन्तै पछि उनले Seminary मा प्राप्त भएन। उहाँले, सोभियत सेना मा सेवा पारित त्यसपछि चालक रूपमा काम गरे। सोभियत शिक्षा छैन सबै धार्मिक थियो, र आमाबाबुले पनि कसरी, तर, ती दिनमा केही थिए जो seminaries, आफ्नो सन्तानलाई पठाउन विचार छैन। मात्र नजिक गर्न 90 औं वर्ष तिनी सक्षम गर्न प्रविष्ट Seminary र नेतृत्व उहाँलाई यो यात्रा गर्न त्रिएकको-Sergius Lavra। उहाँले परमेश्वरको जडान महसुस र आध्यात्मिक पथ मा प्रारंभ गर्न फैसला गरेको छ कि त्यहाँ थियो।
उहाँले एक इन्जिनियर रूपमा ईटा कारखाना मा काम थियो, त्यो अनुपस्थिति, को Seminary मा अध्ययन आफ्नो खाली समय मा। बुबा Stachys त्यतिबेला पहिले नै थिए, र पत्नी र छोराछोरीलाई। एक पुजारी बन्ने आफ्नो विचार, र तिनीहरूले ठूलो संवेदनशीलता र समझ संग यस प्रतिक्रिया देखाएका समर्थित।
1992 मा उनले Seminary स्नातक। उहाँले विजेता को चर्च मा आफ्नो काम को लागि सम्मानित गरिएको थियो। पहिलो एक बैजनी calotte, बिशप Eulogius उसलाई प्रस्तुत भएको थियो। 1997 मा उहाँले लगाउने अधिकार सम्मानित गरियो एक pectoral पार। तीन वर्ष पछि, कुलपिता Alexy द्वितीय , त्यो archpriest श्रेणी को निर्माण प्रदान गरिएको थियो। 2006 मा, उनले Alexandrov-Kirzhachsky Deanery आध्यात्मिक बुबा बने। आफ्नो अन्तिम पुरस्कार उहाँले सेन्ट Demetrius, रोस्तोव को महानगरीय को आदेश उहाँलाई सम्मान गर्ने आफ्नो Beatitude व्लादिमीर, प्राप्त।
उहाँलाई सफल र विश्व हेर्नुहोस्। प्राचीन मात्र होइन रूस मा धेरै पवित्र स्थानहरू, भ्रमण, तर पनि मिश्र, माउन्ट Accommodation लातविया Accommodation, साइप्रस र कोर्फू मा। जताततै उहाँले आफ्नो चर्च को अनुयायीहरूले लागि प्रार्थना गरे।
सेन्ट निकोलस चर्च: जागृति
O. Stachys पनि ग्रामीण चर्च को reviver रूपमा चिनिन्छ। 1992 मा उहाँले सेन्ट निकोलस चर्च पठाइएको थियो। उहाँले केही अनुयायीहरूले उहाँलाई भ्रमण, लगभग पूर्ण नष्ट भएको थियो। प्रयासको एक धेरै, चर्च पुनर्स्थापना Stachys बुबा राख्न उहाँले पर्खालहरु चित्रित ennobled क्षेत्रमा। आज यो स्थान मात्र होइन व्लादिमीर क्षेत्रका लागि प्रसिद्ध छ।, तर एक सम्पूर्ण रूपमा रूस सारा। यो चर्च अनौपचारिक रूसी heartland चमत्कार को एक राम्रो-योग्य शीर्षक छ।
मन्दिरको क्षेत्र मा त्यहाँ एक refectory, बप्तिस्मा चर्च, पवित्र लामो वास्तै गरिएको छ जो वसन्त छ। मन्दिरमा 1,500 मानिसहरू समायोजित गर्न सक्छन्। पुरानो मानिसको जीवनमा रूपमा, उहाँको मृत्यु, मान्छे अझै पनि यस मन्दिरमा लागि गाउँमा Filippovskiy जानुहोस्।
एल्डरले मदतको लागि मान्छे को एक विशाल संख्या आकर्षित। तिनीहरूलाई बीच आफ्नो समस्या, गायक, कलाकार, statesmen इमानदार कार्यकर्ता थिए। तिनीहरूले यूराल, साइबेरिया, ग्रीस, फ्रान्स र अमेरिका बाट, टाढा बाट आयो। एक लागि दिन पिता 500 मान्छे पाहुना गर्न सक्षम Stachys।
आफ्नो प्रार्थना उहाँले यस्तो दबाइ लत, रक्सीमा धेरै लत बसेको अबस्था र धूम्रपान रूपमा भयानक दुर्व्यसनहरूमाथि मानिसहरूलाई निको सकेन। उहाँले प्रत्येक लिए र हरेक एक उहाँबाट प्रस्थान सुन्न, तयार थियो, कुनै जवाफ दिनुभयो। उहाँले हृदय, र प्रार्थना र उहाँको सल्लाह को मामिलामा मदत गरे।
बुबा Stachys: महत्त्वपूर्ण मिति
जुलाई 21, 1981 - मिति भन्दा Stachys बुबा लागि महत्त्वपूर्ण मध्ये एक भएको छ जो। उहाँले, अर्को शब्दमा, ordination लिए कि ordination, consecration प्रदर्शन त थियो, मसीही रीतिथितिहरू र sacraments प्रदर्शन गर्ने अधिकार दिइएको छ। यो घटना पछि थियो, आफ्नो बुबा, कल Stachys सुरु भएको सत्तरी को सम्मान मा चेलाहरू Stachys।
अगस्ट 25, 1981, उहाँले रूपमा Deacon राजकुमार व्लादिमीर मन्दिर (व्लादिमीर) बन्ने, तल्लो चरण संग, अपेक्षा, आफ्नो धार्मिक गतिविधिहरु थाले।
मार्च 1984 मा, त्यो नै स्थिति (Alexandrov) गर्न, पवित्र त्रिएक गिरजाघर सारियो।
डिसेम्बर 30, 1990, उहाँलाई खाली र अधूरा, तर अझै पनि एक Seminary थियो र एक Deacon सेवा पछि, उहाँले पहिलो पवित्र त्रिएक गिरजाघर (Alexandrov) मा एक पुजारी नियुक्त हुँदा।
दुई वर्ष पछि 19 अप्रिल, उहाँले सेन्ट निकोलस चर्च को rector नियुक्त गरियो (व्लादिमीर क्षेत्र।)
रूसी अर्थोडक्स चर्च राजकुमार व्लादिमीर III डिग्री को आदेश - अप्रिल 2003 मा, उहाँले अर्को पुरस्कार प्राप्त निम्न वर्ष को मार्च मा रूसी अर्थोडक्स चर्च, III डिग्री को मास्को को राजकुमार दानियल, को आदेश सम्मानित गरिएको थियो।
स्वागत Stachys पिता को दिन, दुर्भाग्यवश, अन्त गर्न आए। May 15, 2016 साँझ पुरानो मानिस मृत्यु दिन। उहाँले आफ्नो लामो र अत्यधिक आध्यात्मिक जीवनको 75 वर्ष मृत्यु भयो। उसलाई मान्छे धेरै आए अलविदा गर्न भन्नुहोस्। आफ्नो गम्भीर स्थित छ उहाँले आफ्नो काँध र यसको जीवनकालमा dilapidated मा लिए जो मन्दिर, दायाँ अर्को, यो सचमुच खरानी देखि उदाउनु व्यवस्थित छ। तिनीहरूले सल्लाह र सहयोगको लागि उहाँलाई आए, र सबैलाई आए के को लागि, टाढा संग आए। केही तुरुन्तै आफ्नो सबै दुर्व्यसनहरूमाथि, अरूलाई आउन तिनीहरूलाई tearing को प्रश्न धेरै वर्ष र लागि जवाफ पाएका छन् फाले। उहाँलाई को स्मृति एक लामो समय को लागि बस्नेछन्।
इस्लाम मा पोस्ट कसरी पकड?
मास्को। Cathedrals र चर्च
अगमवक्ता मुहम्मद को जन्म ठाउ गाडे र कहाँ छ? जो शहर मा अगमवक्ता मोहम्मद जन्म भएको थियो?
Reverend Afanasiy Afonsky: जीवनी, इतिहास, प्रतिमा र प्रार्थना
KUL Sharif मस्जिद: उनको बारेमा सबै
को Cockroaches कहाँ गरे? किन Cockroaches गायब छ?
आफ्नै हातमा "Matiz" ट्युनिङ। सामान्य विकल्प
गर्भावस्था मा ईर्ष्या: गराउनुहुन्छ। गर्भावस्था को समयमा ईर्ष्या लागि दबाइ लिन के
Spouses कुल संयुक्त सम्पत्ति
गर्भावस्था मा एक धब्बा मा Cocci। एक धब्बा मा Cocci - यो के हो?